Yan Aung: အကူအညီတောင်းခံပါတယ်…
ခွေ ... အစိမ်းရောင်ရက်စွဲများ ...(2001)
အမည်- မဟာဝီရ အို... ဗုဒ္ဓ တေးရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ ထူးအိမ်သင်
mp3 link ---http://www.htooeainthin.com/songs/ah_sein_yaung.php
အဲဒီ link ကတော့အသုံးကျမယ်
အဲဒီ့လင့်ခ်ကို ကျွန်တော် သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်. ဟုတ်တယ် အဲဒီ့သီချင်း မဟုတ်ဘူး.
ဒါပေမယ့် တစ်ခြားအဖိုးတန် သီချင်းလေးတွေရဲ့ စာသားလေးတွေကိုပါ တွေ့လိုက်ရတယ်
အဲဒီ့အတွက် ဦးရဲမြတ်သူကို ကျေးဇူးလှိုက်လှဲစွာ တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ.
လောကနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးရဲမြတ်သူမှာ လက်လှမ်းမီတာလေးတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်.
ကျွန်တော်ဆီမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချလို့ မရလို့ လင့်ဘဲပို့လိုက်တာ..
3 Mitzima-Htoo Ein thin
အဆင်ပြေသွားပြီလားမသိဘူး...။ ကျွန်တော့မှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်...။ ရှကြည့်ပါဦမယ်...။ ခေီရောစာအုပ်ရော...။ အဖွဲ့ခွေလေးပဲ...။ စည်သူလွင်တို့ လေးလေးဝါးတို့ ပါတယ်ထင်တာပဲ...။
အနှင်း အကိုပြောပြတဲ့ လောကနတ် လက်မှာ ကိုင်တာက စည်းနဲ့ဝါးပါတဲ့၊ အနှင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်မှာတော့ လောကနတ်ကို ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ လောကနတ် - 1. deity revered by the world 2. celested being noted for peacemaking, usually depicted in dancing posture with the feet holding timing cymbals လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ အနှင်းတော့ လောကနတ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာတော့ မကြားဘူးပါဘူးအကိုရန်။
I have to say thank you. I got myanmar novels in ur blogger. Thanks for that.Can you add more novles? I love to read novles.Pls
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ. သီချင်းလေးအတွက်ရော၊ လောကနတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာလေးတွေ ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ရောပေါ့…
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများရဲ့ မေတ္တာကို ရရှိခံစားပြီး ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ခင်ဗျာ…